भगवान किन पुजिन्छन् ? यस्ता हुन्छन् भगवानका गुणहरू - pnpkhabar.com
You are at:Home»धर्म/दर्शन»भगवान किन पुजिन्छन् ? यस्ता हुन्छन् भगवानका गुणहरू
By रिता घिसिंग on ५ आश्विन २०७५, शुक्रबार ०५:५९ धर्म/दर्शन
एजेन्सी : हामी भगवान र मानिसको अन्तरलाई कसरी बुझ्छौं ? आस्तिकहरुले भगवान र जीवहरुबीचको दूरीलाई अनन्त रुपले विश्लेषण गर्दछन् भने नास्तिकहरु त्यतिसम्म पनि आवश्यक मान्दैनन् । तर, भगवानको समान गुणहरु भएको मानिसपनि भगवान समान बन्नसक्छ भन्ने कुरा आस्तिक मतमा पनि पाईन्छ । तर, कस्तो हुन्छ भगवानको विशेषता ?
भगवानको ऐश्वर्य भनेको नियमन क्षमता हो । अर्थात् नियमन सामथ्र्यत्वम् इति भगवत् ऐश्वर्य लक्षणम् । अर्थात् पृथ्वीमा विभिन्न विरुवा र जीवहरुको सृष्टि गर्न क्रममा नियमनलाई मूल ध्यान दिनु भगवान्को ऐश्वर्य हो । जस्तै यदि भगवानल् नियमन नगरेर सिंहको सन्तान पनि मानिसको समान भएको भए कति भयाभय स्थिती सिर्जना हुन्थ्यो ? जस्तै सर्पले कति अण्डा बनाउँछ र
कति सर्प जीवित हुन्छ ? यदि सर्पको सबैबच्चाहरु जीवित हुन्ये भने मानिसलाई बाँचेर हिँड्नै मुस्किल हुने अवस्था थियो । त्यसैले भगवानले त्यसको नियमन गर्ने गरेका छन् । त्यही नै भगवानको ऐश्वर्य हो ।
जसरी कुनैपनि एउटा महान् व्यक्ति आफ्नो स्तरीयताको कुनै पर्वाह नगरी साना र ठूलालाई समान रुपले दर्शन दिन्छन् । त्यसैगरी भगवानले पनि दुखी, सुखी, धनी गरिब जस्ता भेद नहेरी समान रुपमा उनीहरुलाई सहज दर्शन दिनु नै भगवानको सौशील्यता हो ।
जसरी गाईले भर्खर जन्मिएको बाच्छाको शरीरमा रहेको फोहोरलाई विर्सिएर दोषलाई पनि गुणको रुपमा सम्झिएर आफ्नो जिब्रोले बाच्छाको शरीरमा सफाई गर्छ । आफ्ना भक्तका दोषहरुलाई गुणको रुपमा सहज रुपमा स्वीकार्नु नै भगवानको वात्सल्य गुण हो ।
आफ्ना भक्तहरुको वियोग सहन नसक्ने गुण नै भगवानको मार्दव गुण हो । भगवानको यही गुणलाईविश्लेषण गर्दै यमुनाचार्य स्तोत्रमालामा भनिएको छ । ‘क्षणेकपि ते यद्विरहोति दुः सह । अर्थात् जुन आश्रित जीवको क्षणभरको पनि वियोग सहन नसक्नु नैै भगवानको मार्दव गुण हो ।
यसबाहेक आश्रित जीवहरुप्रति शरीर वाणी र व्यवहारबाट एउटै काम गर्ने भगवानको गुण आर्जव हो । सामान्य मानिसले बोल्ने र गर्ने काममा पुरै फरक गर्ने गरेका छन् । तर, भगवानको विशेष गुण भित्र त्यसको ठीक विपरित गुण हुने गरेको छ । यससँगै आफ्नो आश्रित जीवको रक्षा गर्ने सौहार्दता, आश्रित जीवलाई शरणागतीमा लिने र उनीहरुलाई आफूप्रति जानकार बनाउनु भगवानको नयाँ गुण हो । यससँगै कारुण्य, माधुर्य, गाम्भीर्य र आदर्य भगवानको मुलभूत गुणहरु हुन् ।